Madaxweynaha oo u hambalyeeyay SNTV iyo Radio Muqdisho – Radio Muqdisho
Madaxweynaha oo u hambalyeeyay SNTV iyo Radio Muqdisho
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa si wadajir ah hambalyo ku aaddan sannadka guurada dib u howlgelinta warbaahinta Qaranka u diray madaxda iyo shaqaalaha wasaaradda Warfaafinta.
“Soomaaliya iyo guud ahaan saxaafadda Soomaaliya wax weyn ayaad ku soo kordhiseen, dadka Soomaaliyeed dhagahooda wax fiican ayaad maqashiiseen indhahoodana wax fiica baad tusteen marka waxaan idin leeyahay hambalyo” ayuu yiri madaxweynuhu.
“Waxaan bogaadinayaan dhammaan shaqaalaha wasaaradda warfaafinta gaar ahaan Telefishanka iyo idaacadda Qaranka oo runtii baahidii warfaafineed ee Soomaaliyada maanta joogta ay qabtay dowr weyn ka qaadatay oo wax weyn ku soo kordhisay dalka.
“Telefishan gaaban oo sacado gaaban hawada ku jira ayuu ku bilowday 1983dii, maanta wuxuu marayaa Telefishan ballaaran 24 saac hawada ku jira, shanta qaaradood ee dunidana laga fiirsado, horumar aad iyo aad u wayn waaye waana u hambalyeyneynaa.
Madaxweynaha ayaa sheegay in loo baahan yahay in la sii ballaariyo TV-ga oo la suurta galiyo in dalka oo dhan la gaarsiiyo ayadoo aysan daawadayaashu aysan u baahan inay iibsadaan qalabka ay hadda ka daawadaan TV-ga.
“Waxaan ku dhiirri galinaynaa inay ku dadaalaan in dadka Soomaaliyeed ee deggan gobollada dalka ay helaan TV-ga ayagoo aanan u baahan inay satellite-ka ka helaan, sida idaacaddaba loo gaarsiiyay gobollo badan oo dalka ah, Waxaan rajaynayaa in sanadka xiga aan idinku bogaadinno (oo aad sameysaan), waxaan idin leeyahay halbalyo.
Ciidamada amniga oo Caawo xiray Idaacadda Shabeelle
Guddoomiyaha Baarlamaanka oo soo dhaweeyay dowrka warbaahinta dowladda